Momba anay - Yantai Hongning International TRADE Co., Ltd.
Ny fikatsahana kalitao ambony sy famoronana serivisy tonga lafatra no tanjonay tsy tapaka
Ny mpanjifa aloha, mifantoka amin'ny kalitao, mitazona ny trosa amin'ny asa aman-draharaha no fanahin'ny serivisinay
Yantai Hongning International Trade Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny tanànan'i yantai faritanin'i Shandong, ny tanànan'i yantai dia miaraka amin'ny lohasaha tsara ny ranomasina Bohai ary akaikin'ny seranan'i Qingdao sy seranam-piaramanidina Qingdao, tanàna amoron-dranomasina malaza any an-trano sy any ivelany izy io.
Ny orinasa Yantai hongning dia orinasa mpanafatra sy fanondranana matihanina amin'ny karazana kapila aluminium hafa, misintona kavina aluminium, manintona satroka fehiloha kapila plastika aluminium-plastika, kapsily PVC, tavoahangy fitaratra sns. satroka, ny alim-borona misintona na satroka satro-boninkazo dia ampiasaina hamehezana tavoahangy labiera, tavoahangy zava-pisotro sy tavoahangy ronono sns ary mora ny manokatra sy mandray azy tsara amin'ny mpanjifa.
Ny vokatray dia aondrana any Eropa, Oceania, Amerika atsimo, Afrika, Azia afovoany, Afovoany Atsinanana, ary Azia atsimo atsinanana sns mihoatra ny firenena 30 sy faritra manerana an'izao tontolo izao.
Ny ekipanay dia manana traikefa ara-barotra manankarena ary manome serivisy matihanina hihaona amin'ny takiana amin'ny fomba fahaiza-manaon'ny mpanjifa sy hahatratra ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa. Lisitry ny vokatra avo lenta, tsara kokoa aorian'ny serivisy sy serivisy lozisialy mety manome toky ny kalitaon'ny mpanjifa sy ny fotoana fandefasana azy. Tsy hitsitsy ezaka izahay hanolotra ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa na any an-trano izany na any ivelany, hiara-mivoatra amin'izy ireo miaraka amin'ny ho avy vaovao mamiratra.
Miarahaba anao i Yantai Hongning!